Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Muqdisho iyo ballan-qaadyo loo sameeyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Muqdisho iyo ballan-qaadyo loo sameeyay (AKHRISO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa gelinkii dambe maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kulan kula yeeshay dhaxal sugaha magaalada Abu Dhabi ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed Bin Zayed Al Nahyan.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa u ballanqaaday Soomaaliya lacag dhan 15 milyan oo doollarka Mareykanka ah, kaas oo lagu kabaayo miisaaniyadda bil kasto oo ay dowladda Soomaaliya ku bixineyso mushaaraadka ciidamada Soomaaliya.
Sidoo kale, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ballanqaaday in abaaraha Soomaaliya ay ku bixinayso lacag dhan 100 Milyan oo Dirham, taasoo ololaheeda ay haatan bisha Cas ee dalkaasi bilawday.
Dhinaca kale, war-saxaafadeed maanta kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada dal ay isku af garteen in midnimada Soomaaliya iyo dhulkeeda ay yihiin mid lama taabtaan ah.
Illaa iyo haatan ma jiro war-murtiyeed rasmi ah oo ay labada dhinac si wadajir ah uga soo saareen waxyaabaha ay kulankooda uga hadleen, sidoo kale jiro war rasmi ah oo illaa iyo haatan kasoo baxay dhinaca Imaaraadka Carabta oo ay uga hadleeyso heshiisyadda ay dhawaan la gashay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.